I-Ceros: Yenza isiQinisekiso esiMnandi ngaphandle kweNtuthuko | Martech Zone
I-Ceros: Yenza uMxholo oMnandi wokunxibelelana ngaphandle koPhuculo
Lwesine, ngoFebruwari 26, 2015 Douglas Karr
Njengokuba iWindowsPress ingumnini wenkqubo yentengiso yolawulo lomxholo, isafuna iziseko eziluqilima, ulondolozo oluqhubekayo, kunye neqela elikhulu lophuhliso ukwakha umxholo okanye iplagi eyenza ukuba ikusebenzele. Andizami ukuthoba kancinci ukuguquguquka okumangalisayo, kodwa amathuba okuba umsebenzisi asayine kwaye akhe iwebhusayithi entle uza kuthatha umsebenzi.
Kananjalo, iparadigm yewebhusayithi equlathe imenyu, incwadana, kunye nebhlog iyaqala ukutshintsha njengokubalisa amabali kunye nemxholo yemultimedia eqhuba ngakumbi ukubandakanyeka. Isityalo esitsha sezicwangciso zesiza ziyavela ezibonelela ngendlela yokuhamba undwendwe ngebali kunye nokuguqukela endaweni yegridi entsonkothileyo apho umsebenzisi kufuneka azingele aze akhangele ukufumana oko akufunayo.
IiCeros Ikhathalogu yedijithali kunye nenkqubo yolawulo lomxholo enethemba lokwenza nje oku. Ngokutsala kunye nokwehla, ujongano oluphendulayo kunye nokudityaniswa kwe-ecommerce ngaphandle kwebhokisi, ibonelela ngeqonga lomxholo we-agile apho umthengisi anokugxila khona kwimyalezo ngaphezulu kokulwa netekhnoloji.
Nazi izinto eziphambili, ezizodwa zeCeros:
Isikhangeli esipheleleyo kunye neLifu elisekwe ngomboniso wexesha-lokwenyani kunye nokuhlela kunye nokusebenzisana kwexesha lokwenyani phakathi kwabasebenzisi.
Uhlalutyo olwakhelwe ngaphakathi ezibandakanya zonke iziseko kubahlalutyi yonke indlela eya ekuzibandakanyeni kwe-KPIs.
Iqonga ledigital-yokuqala ye-HTML5 - eyokuqala kwaye kuphela yedijithali-kuqala iqonga
Tsala kwaye ulahle ujongano.
Ukudityaniswa kwe-ecommerce Tsala iipaneli zemveliso kunye nenqwelo yokuthenga ngokusebenza ngokupheleleyo ngaphandle kophuhliso.
Isixhobo kunye nesiteshi se-agnostic -Yakha amava ibe nye kwaye iyaqhelana nobukhulu bescreen kwaye isebenze nakweyiphi na imilinganiselo ye-iframe.
Nanku umzekelo omangalisayo wetekhnoloji yiNewscred, the Amandla okuBalisa amaBali.
Jonga ezinye ze imizekelo emikhulu ye-infographics esebenzayo, ii-microsites kunye neendawo zokubalisa amabali ezakhiwe kwiCeros. Yiplatifomu esekwe kakuhle ene-a Inani elikhulayo labathengi abakhulu.
tags: inzalaumxholo wee-interactiveI-infographics esebenzayoiindabaUkuxoxa ngamabaliukubalisa ibali cms
IWebtrends ivula ukuBonakala kweDatha eNkulu ngeWebtrends yokuKhangela
Uzilungisa njani iimpazamo ezi-4 zeNtengiso eziShukumayo ozenzayo